Wasiirkii hore ee cayaaraha oo loo qabtay ilaa iyo khamiista inuu booliska isku soo dhiibo – The Voice of Northeastern Kenya
Anwar Mohamed October 15, 2018
Safiirka Kenya ee dalka Austria horayna u soo noqday wasiirkii wasaaradda cayaaraha Xassan Wario iyo madaxii hore ee guddigga cayaaraha Olimbikada dalka ee NOCK ,Kipchoge Keino ayaa loo qabtay ilaa iyo maalinka khamiista ah inay isku soo dhiibaan booliska hadii kale la soo xirayo.
Mas’uuliyiintan ayaa ka mid ah afar sarkaal oo maanta aana maxkamada ka soo hormuuqan.
Waxaa saaka damiin lacageed oo min hal milyan oo shilin lagu siidaayay xoghayihii hore ee wasaaradda cayaaraha , dhaqanka iyo farshaxanka Richard Ekai , Stephen Soi iyo Francis Kinyili kadib markii ay iska fogeyeen eedeymo loo soo jeediyay.
Sido kale saddaxdan sarkaal ayay maxkamadu ku amartay inay soo gudbiyaan baasabooradooda.
Mr Ekai ayaa lagu waday inuu u safro Ruushka si uu ula wareego xilka safiirnimo ee loo magacaabay.
Xassan Wario iyo labada eedeysane ee kale ayaa laga doonaya in ugu dambeyn 6-da maqribnimo ee khamiista ay iska xaadiriyaan xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista si jimcada maxkamada loo geeyo.
Sarakiishan uu ka midka yahay wasiirkii hore ee cayaaraha ayaa loo haystaa fadeexad laga soo tabiyay wasaaradaasi oo lagu lunsaday 55 milyan xiligii cayaarihii Olimbikada ee sannadkii 2016-kii.
Arrintan ayaa timid kadib markii agaasimaha waaxda dacwad oogidda dalka Mr. Nuurdiin Xaaji uu soo saaray amar ah in dacwado lagu soo oogo wasiirkii hore ee wasaaradda cayaaraha Xassan Wario , xogayihii hore ee wasaaraddasi Richard Ekai, guddoomiyihii hore ee guddiga cayaaraha olimbikada dalka ee (NOCK) Kipchoge Keino iyo madaxii wafdigii Kenya ka socday ee sannadkii 2016-kii tagay magaalada Rio ee Brazil Stephen Soi.
Bayaan uu soo saaray agaasimaha dacwad oogidda ayaa waxaa sido kale lagu xusay magacyada agaasimihii hore ee wasaaradda cayaaraha , dhaqanka iyo farshaxanka u qaabilsanaa dhanka maamulka Harun Komen ,Francis Kanyili, xoghayihii guud ee guddiga NOCK iyo Patrick Kimathi oo ahaa sarkaal ka tirsanaa waaxda maaliyadda ee wasaaradda.
7-dan sarkaal ayuu Nuurdiin xaaji doonaya in la maxkamadeeyo si lagula xisaabtamo eedeymo dhan ilaa iyo 6 oo loo soo jeediyay.
Waxyaabaha lagu eedeyay waxaa ka mid ah ku takriifal awoodeed iyo sido kale inaysan u hoggaansamin shuruucda la xiriirta maareynta habboon ee kheyraadka dadweynaha loogu adeego.
Eedeymaha loo soo jeediyay mas’uuliyiintan waxaa ka mid ah bixinta lacago aanan la ansaxin , inay bixiyeen lacago gunnooyin ah oo ka badan qiimihii la qorsheeyay.
Nuudiin Xaaji ayaa rumeysan in mas’uuliyiintan ay ku lug lahayeen lunsashada 22.4 milyan oo shilin oo la sheegay in tikeetyada lagu iibsaday in kastoo aysan isticmaalin cayaartooyda iyo sarakiishii safray labaduba.
Sido kale Nuurdiin Xaaji ayaa amar siiyay maamulka dowlada dhexe u qaabilsan dib u soo celinta hantida la dhacay inuu howlgal arrinkaasi ku aaddan guda galo.
Sannadkii 2016-kii ayay ahayd markii wasirikii wasaaradda cayaaraha ee dalka Xassan Wario uu soo magacaabay guddi baritaano ku sameynayo fadeexad la sheegay in lagu lunsaday 88 milyan oo shilin.
Dhanka kale waxaa isla maanta mar kale maxkamada ka soo hormuuqday eedeymo loo soo jeediyayna iska fogeeyay Jacque Maribe oo suxufiyad ka howlgasho warbaahinta maxaligga ee Citizen iyo Joseph Irungu.
Labadan qof ayaa lala xiriiriyay dilkii bishi hore ka dhacay xaafadda Kilimani ee magaaladatani Nairobi ee lagu qaarajiyay Monica Kimani.
Garsoore Jessie Lessit ayaa go’aamisay in dacwadda ay wajahayaan dib loo dhageysto arbacada.
Baaritaano dhanka maskaxda ah oo lagu sameeyay Maribe iyo Irungu ayaa lagu sheegay inaysan wax dhibaato ah qabin.
Joseph Irungu oo ku magacdheer Jowie, ayaa la xiray 24-kii bishii hore ee Septembar kadib markii boolisku ay muuqaal la duubay ka dhex arkeen inuu ku sugnaa goobta dilkaasi uu ka dhacay.
Sido kale Jacque Maribe ayaa iyadana la xiray kadib markii boolisku ay sheegeen in Irungu uu adeegsaday baabuur ay leedahay.
← Ururka macalimiinta KNUT oo mar kale shaqa joojin ku hanjabay
Jacque Maribe iyo Joseph Irungu oo iska fogeeyay eedeymihii loo soo jeediyay →